Free forum : CREATOR KING
Run Box အတွက် command လေးတွေပါနော်
Run command box အတွက် command များ
Run box မှာ ရိုက်ရှာလို့ ရတဲ့ command လေးတွေ ကျွန်တော် ရှာလို့ ရသလောက်
ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။လေ့လာကြည့်ပါဦး။ ကျွန်တော်လည်း ၃ ခုလောက်ပဲအလွတ်ရတာ ။ :-D
Add/Remove Programs = appwiz.cplV Administrative Tools = control admintools
Disk Management = diskmgmt.ms
c Disk Partition Manager = diskpart
သူများရေးထားတာကို ရှာပြီးထည့်ပေးတာပါ ။ (ဘယ် Link က ရတာလဲဆိုတာ မမှတ်မိတော့လို့ မညွှန်းပေးထားတာပါ။) %allusersprofile% …………….. * ကွန်ပျုတာကို သုံးနေတဲ့သူ အားလုံးရဲ့ Profile တွေရှိနေတဲ့ နေရာကို ပြပေးပါတယ်။ %appdata% ……………..* အသုံးချဆော့ဖ်ဝဲတွေရဲ့ အချက်အလက်တွေ သိမ်းထားတဲ့ နေရာပါ။ %comspec% ……………..* Command shell တကယ် အလုပ်လုပ်နေတဲ့ နေရာ။ %homedrive% ……………..* လက်ရှိသုံးနေတဲ့ သူရဲ့ Home Drive နေရာ။ %homepath% ……………… * လက်ရှိသုံးနေတဲ့ သူရဲ့ Home Drive လမ်းကြောင်း။ %logonserver% ………………* လက်ရှိဝင်သုံးနေတဲ့သူရဲ့ Domain Controller %programfiles% ………………* ဆော့ဖ်ဝဲတွေ ထည့်သွင်းထားတဲ့ နေရာ %systemdrive% ………………* ၀င်းဒိုးရဲ့ ပင်မ Directory %systemroot% ………………* ၀င်းဒိုးရဲ့ ပင်မ Root Directory %tmp% သို့မဟုတ် %temp% ……….* လက်ရှိသုံးနေတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲတွေ အလုပ်လုပ်လက်စ ဖိုင်တွေရှိရာနေရာ %username% ……………..* လက်ရှိသုံးနေတဲ့သူ အမည် %userdomain% ……………..* လက်ရှိသုံးနေတဲ့ Domain အမည် %userprofile% ………………* လက်ရှိသုံးနေတဲ့သူရဲ့ Profile ရှိရာနေရာ %windir% ………………* OS တင်ထားတဲ့ နေရာ ( သံလုံငယ် blog မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။ ) bounce bounce
အသုံးဝင်မယ့် tip လေးတွေပါနော်
ကျွန်တော် internet သုံးဖြစ်တဲ့ အချိန်တွေမှာ လိုက်လံရှာဖွေ ဖတ်ဖူးတဲ့ tips လေးတွေကို ရေးပေးလိုက်တာပါ။
အသုံးဝင်မဲ့ tips လေးတွေပါ။လွယ်လွယ်ကူကူ ဖတ်လို့ရအောင် စုစည်းပေးလိုက်တာပါ။
ဒါတွေကို MMIT Development (http://problemclean.ning.com/) ၊ သံလုံငယ်
(http://www.thanlonnge.com) ၊ ကိုဇော် ၏ စိတ်ကူးရင် အိပ်မက်များ
(http://kozaw357.multiply.com/) ၊ Mistake 51 Area
(http://mistake51area.ning.com) စတဲ့နေရာတွေကနေ လေ့လာဖတ်ရှုခဲ့ပါတယ်။
၁။ Adobe reader ကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် ဖွင့်ကြမယ်။ ( MMIT မှ) Adobe reader icon ကို right click ထောက် properties က find target ကနေ သူ့ရဲ့ location ကိုသွားပါ .. အဲ့ဒီက plug_ins ဆိုတဲ့ folder အောက်က ရှိသမျှ files အားလုံးကို select လုပ်ပြီး cut လုပ်ပါ ... ပြီးရင် Optional ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာ paste လုပ်ပေးလိုက်ပါ။ reader ပွင့်တာ သိသိသာသာ မြန်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် ။
၂။ Copy to / Move to ကို Right-Click Menu မှာ ထည့်သုံးရအောင် (သံလုံငယ် မှ)
ကျနော် ကွန်ပျူတာ စသုံးထဲက ကြိုက်မိတဲ့ function လေး။ move to / copy to ဆိုတာလေးတွေလေ။ မသိသေးရင်တော့ စမ်းကြည့်ဗျာ။ copy to ကတော့ ကို select လုပ်ထားတဲ့ folder/file ကို ထပ်ပွားချင်တဲ့ နေရာမှာ ထားပေးနိုင်သလို၊ move to ကလည်း ရွှေ့ပေးနိုင်တယ်ဗျ။ copy/cut လုပ်ပြီး folder ရွေး paste လုပ်တာထက်တော့ ပိုမြန်တာ အမှန်ပဲ။ အဲဒါတွေက menu bar မှာ ရှိတာလေ။ Desktop မှာ ရှိတဲ့ ဖိုင်ဆိုရင်တော့ ချက်ချင်းလုပ်လို့ မရဘူးပေါ့။ (run မှာ desktop လို့ရိုက်ထည့်ပြီး window တစ်ခုအနေနဲ့ ဖွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ သုံးလို့ရပါတယ်) စမ်းကြည့်ဗျာ။ ကြိုက်တယ် သုံးလို့ အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် အဲဒါကို Right-Click လုပ်တာနဲ့ ပေါ်လာမယ့် menu မှာ ထည့်လိုက်မယ်။ ပိုအဆင်ပြေမလား ? ။ စလုပ်ကြည့်ရအောင်ဗျာ ။ လွယ်ပါတယ် .....start - Run မှာ regedit လို့ ရိုက်ထည့်ပြီး Registry Editor ကို ၀င်ပါတယ်။ ပြီးရင် အောက်က D-tree အတိုင်း ContextMenuHandlers ကို ရှာပါ။ HKEY_CLASSES_ROOT\_AllFilesystemObjects\_shellex\_ContextMenuHandlers ContextMenuHandlers ဆိုတဲ့ item ကို R-Click လုပ်ပြီး New - Key ကို နှိပ်ပါတယ်။ Copy to လို့ နာမည်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Copy to ကို နှိပ်ပြီး ညာဘက်က (Default) ဆိုတာကို Double-click နှိပ်ပြီး တန်ဖိုးကို အောက်က code လေး ကူးထည့်ပေးလိုက်ပါ။
နာက်ပြီးရင် move to ကိုလည်း အဲဒီ အတိုင်းပဲ ထည့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ContextMenuHandlers ဆိုတဲ့ item ကို R-Click လုပ်ပြီး New - Key ကို နှိပ်ပါတယ်။ Move to လို့ နာမည်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Move to ရဲ့ (Default) value ကို လည်း D-Click နှိပ်ပြီး အောက်ပါ code လေးကူးထည့်ပေးလိုက်ပါ။
ဒါပါပဲ .. ပို၍မြန်ဆန်စွာ အသုံးပြုနိုင်ကြပါစေဗျာ .....
၃။ Windows XP မှာ start နဲ့ shutdown မြန်အောင်လုပ်နည်း... (ကိုဇော် ၏ စိတ်ကူးရင် အိပ်မက်များ မှ) XP မှာ start နှင့် shutdown မြန်အောင်လုပ်နည်းလေးပါ..။
XP အသုံးပြုသူတွေ အတွက် အသုံးဝင်မယ်ထင်လို့ ဒီပိုစ့်လေးကို တင်လိုက်တာပါ…။ အရင်ဆုံး start မြန်အောင်လုပ်နည်းကို ဆွေးနွေးပါ့မယ်….။
အရင်ဆုံး အပေါ်က အတိုင်းပဲ start Run (or) win + R ကို သွားလိုက်ပါ…။ Run Box တွင် regedit ကိုရိုက်ထည့် ok ပေးပြီး အောက်မှာ ရေးထားတဲ့ အတိုင်း အစဉ်လိုက်လုပ်ကြည့်ပါ...။
HKEY_CURRENT_USER>> Control Panel >> Desktop ထိရောက်အောင်သွားပါ.. ဘေးက Box မှာ AutoEndTasks ဆိုတာကိုရှာပြီး Value data မှာ 1 ပြောင်းပေးလိုက် HungAppTimeout နဲ့ WaitToKillAppTimeout နှစ်ခုလုံးကို 1000 လို့ပြောင်းပေးလိုက်ပါ..။ အရမ်းကြီးမြန်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်စိတ်ကြိုက် ပြောင်းကြည့်ပေါ့ ကျနော်ကတော့ 1000 လို့ပဲပြောင်းထားပါတယ်..။ နှစ်ခုလုံး လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ ကွန်ပျူတာကို restart ချလိုက်ပါခင်ဗျာ…။ တက်တာရော ကျတာပါ..မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရမှာပါ ..။
၄။ gtalk မှာ မိမိနာမည်မကျန်ခဲ့စေချင်ရင်......... (ကိုဇော် ၏ စိတ်ကူးရင် အိပ်မက်များ မှ) ကျွန်တော်တို. Gtalk သုံးတဲ့အခါမှာတော်များများကတော့အင်တာနက်ဆိုင်မှာသုံးတာများ ပါတယ်။အခုတင်ပြတဲ့နည်းကတော့အင်တာနက်ဆိုင်မှာမိမိရဲ.Gmail Addressတွေမကျန် ခဲ့စေအောင်သုံးတဲ့နည်းလေးပါ။ဒီလိုပါ။မိမိGtalk မ၀င်ခင် မိမိရဲ.ရှေကဘယ်သူတွေ Gtalk ၀င်သွားလဲ၊သူတို.ရဲ. Gmail Addressတွေကဘာနာမည်လဲဆိုတာသိချင်ကြပါလိမ့်မယ်။ နောက်တခုက မိမိ Gtalk ၀င်ခဲ့ရင်လဲမိမိ Gmail Address ကိုသူများမသိအောင်ဘယ်လို ဖျက်မလဲဆိုတာတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။သူများသိတော့ကို ကို invite လုပ်မှာပေါ့။အဒီတော့ စက်ထဲမှာ မိမိ Gmail Addressမကျန်ခဲ့စေရန်ရည်ရွယ်ရေးသွားပါတယ်။ စလုပ်လိုက်ရအောင်။
၁။ အရင်ဦးဆုံး Start ထဲက Run ကိုနှိပ်ပါ။ (သို.မဟုတ်)Window+R ကိုတွဲဖိပါ။
၂။ Run Box ကျလာပါက Regedit ကိုရိုက်ထည့်ပေးပါ။ Box ကျလာပါလိမ့်မည်။
၃။ ထို Boxထဲတွင် Folder ၅ခုတွေ.ပါလိမ့်မည်။ ထို Folder ၅ခုမှ ဒုတိယမြောက် HKEY_CURRENT_USER ဘေးရှိ + ကိုနှိပ်ပါ။ List ကျလာပါလိမ့်မည်။
၇။ Account နှိပ်ပါ။ Gmail Address များကိုတွေ.ရပါလိမ့်မည်။ အကယ်လို.မိမိ Gtalk ၀င်ခဲ့ တယ်ဆိုရင်တော့မိမိGmail Addressနာမည် ပေါ်နေပါလိမ့်မည်။
ဖျက်လိုပါက မိမိနာမည် ပေါ်တွင် Right ကလစ်နှိပ်၊Delete ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ Name/Type/Data တို.အောက်ကျန်ခဲ့ပါက Name အောက်ရှိ ab ပေါ်တွင် Right ကလစ်နှိပ်၊Delete ကိုနှိပ်ပေးပါ။
၅။ Boot Time မြန်အောင်လုပ်နည်း (Mistake 51 Area မှ) Boot Time ကို ကျွန်တော်တို့ Window စတက်တဲ့အခါမှာ Boot time ကြာနေတာ ကြုံဖူးကျမှာပါ။ အဲဒီလို ကြုံရင် အောက်ပါအတိုင်းဖြေရှင်းကြည့်လိုက်ပါ။
1. Start မှ Run ကို click လိုက်ပါ။
2. Regedit လို့ ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။
3. HKEY_LOCAL_MACHINE >> SOFTWARE >> Microsoft >>Dfrg >>BootOp t imizeFunction စတဲ့အတိုင်းအဆင်ဆင့်သွားလိုက်ပါ။ BootOptimizeFunction ပေါ်ကို click ပေးလိုက်ရင် ညာဘက်မှာ ရှိတဲ့ Name တွေထဲက Enable ကိုရှာလိုက်ပါ။ Enable ပေါ်မှာ Right click ထောက်လိုက်ပါ။ ကျလာတဲ့ Box မှ Modify ကို click လိုက်ပါ။
4. Edit String Box ကလေးကျလာပါမည်။ Value data မှာ “Y” လို့ တွေ့ရပါမည်။ Y to enable လို့ ပြောင်းလိုက်ပါ။ ပြီရင်တော့ Ok ပေါ့။
၆။ RAM ကိုတိုးမြှင့်ပြီး System ပိုမြန်လာအောင် လုပ်ရအောင်... (MMIT မှ)
အရမ်းရိုးရှင်းပေမဲ့ အသုံးဝင်မယ့် အချက်လေးတစ်ခုပါပဲ။ ပထမဆုံး ကြိုက်တဲ့ Application တစ်ခုကို ဖွင့်လိုက်ပါ...။ ဥပမာ ... Winword ပေါ့...။ ပြီးရင် File Size ခပ်ကြီးကြီး File တစ်ခုကို Open လုပ်လိုက်ပါ။ Ctl + Alt + Del နှိပ်ပြီး Task Manager ကိုခေါ်လိုက်ပါ။ Process Tab မှာ လက်ရှိ Run နေတဲ့ Program တွေ့ရဲ့ List ကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ WINWORD.EXE ကို အထက်နား ကျကျတစ်နေရာမှာ တွေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ Mem Usage မှာ ကြည့်လိုက်ရင် သူသုံးထားတဲ့ Memory ပမာဏဟာ MB အတော်များများရှိတာကို တွေ့ရပါမယ်။ ဒါပြီးရင် Winword ကို ပြန်သွားပြီး၊ Minimize လုပ်လိုက်ပါ။ Task Manager ကိုပြန်သွားပြီး Memory Usage ကို ပြန်စစ်ကြည့်ပါ။ အံ့သြဖို့ကောင်းလောက်အောင်ကို သိသိသာသာလျော့နည်းနေတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် လောလောဆယ် မသုံးသေးတဲ့ Application အားလုံးကို Minimize လုပ်ထားခြင်းအားဖြင့် မိမိရရှိနိုင်တဲ့ RAM ပမာဏကို အများကြီး ပိုတိုးပွားလာစေပါတယ်။ တစ်ပြိုင်နက်သုံးစွဲနေတဲ့ Application အရေအတွက်နဲ့ အမျိုးအစားကိုလိုက်ပြီး RAM အပို ၅၀%လောက်ထိ ထပ်ထွက်လာနိုင်ပါတယ်။ ဘယ် Multitasking စနစ်မှာမဆို၊ Application တွေကို Minimize လုပ်ထားတယ်ဆိုတာ User အနေနဲ့ လောလောဆယ် မသုံးသေးဘူးလို့ ယူပါတယ်။ ဒါကြောင့် Operation System က အဲဒီ Application တွေကို Virtual Memory ကိုပဲ အသုံးပြုစေဖို့ ဆောင်ရွက်ထားပြီး၊ Physical RAM မှာ Code ပမာဏအနည်းဆုံးကိုသာ ရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
၇။ Window ကို အမြန်ဆုံး shutdown ချနည်း ... ( test by me )
ctrl+alt+del နှိပ်ပြီး task manager ခေ
Most users ever online was 30 on Sun Jan 09, 2011 5:21 pm